Baraf cagaaran: waa maxay, sidee loo sameeyay iyo muhiimada ay leedahay | Saadaasha Shabakadda
Sidaan ognahay, isbedelka cimilada ayaa ah dhacdo caalami ah oo naga tagaysa sawirro walwal iyo yaab leh. Taasina waa xaqiiqda ah in heerkulka celceliska adduunka uu si isdaba joog ah u kordhayo, uu sababayo xoogaa xaalado gaar ah. Maaddaama mid ka mid ah aagagga meeraha saamaynta weyn ku yeeshay kororka kuleylka adduunka ay tahay Antarctica, waa halkan meesha aad ku arki karto ifafaale aan caadi ahayn. Maanta waxaan ka hadleynaa mid ka mid ah ifafaalaha ka yaabiyay bulshada cilmiga leh oo dhan. Waxay ku saabsan tahay baraf cagaaran.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa waxa barafka cagaaran uu macnihiisu yahay, astaamaha uu leeyahay iyo cawaaqibka ka dhalan kara ee la xiriira isbeddelka cimilada.
1 Waa maxay barafka cagaaran
2 Baraf cagaaran iyo albedo dhul ah
3 Daraasado ku saabsan algae-yada yaryar ee Antarctica
4 Qashin-qubka cusub ee 'CO2'
Waa maxay barafka cagaaran
Waxa aad ka fikiri karto markaad maqasho erayga baraf cagaaran ayaa ah in dhirtu ay korayaan sababtoo ah dhalaalida barafka Antarctic. Waqtigan xaadirka ah, kororka kuleylka adduunka barafka cad wuxuu isku badalayaa cagaar maadaama algae-yada yaryar ay korayaan. Markay ubaxdo qaab ballaaran waxay leedahay cagaarka barafka waxayna ka dhigeysaa midab cagaar dhalaalaya. Dhacdadan waxaa laga arki karaa xitaa hawada sare waxayna ka caawisay saynisyahannada inay samaystaan ​​khariidad.
Dhammaan xogta waxaa la soo ururiyey iyada oo loo mahadcelinayo dayax gacmeedyada awooda u leh fiirsashada iyo qaadashada sawirrada. U fiirsashada lagala wareegay dhowr xagaa Antarctica waxaa lagu daray indha indheynta satalaytyada si loo qiyaaso dhammaan meelaha barafka cagaaran lagu tijaabin doono. Dhammaan cabbiraadan waxaa loo isticmaali doonaa in lagu xisaabiyo xawaaraha ay algae ugu sii faafayaan qaaradda oo dhan sababo la xiriira isbeddelka cimilada.
Sida la filayo, koritaanka algaeyadan microscopic-ka waxay saameyn ku yeelan doontaa dhaqdhaqaaqa cimilada heer caalami.
Baraf cagaaran iyo albedo dhul ah
Albedo-ka dhulku waa qaddarka shucaaca qorraxda ee ka muuqda korka iyo dib-u-eegista walxaha kala duwan. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah dusha sare oo leh midabyo fudud, daruuro, gaasas, iwm. Barafku wuxuu awood u leeyahay inuu muujiyo ilaa 80% dhacdada shucaaca qorraxda ee dul taal. Maxaa laga ogaaday barafka cagaaran ayaa ah in xogta albedo loo yareeyay 45%. Tan macnaheedu waa kuleyl badan ayaa lagu hayn karaa dusha sare iyada oo aan dib loogu noqonin bannaanka hore.
Waa loo malayn karaa in maadaama albedo ku taal Antarctica ay hoos u dhacayso, waxay noqon doontaa xoog wadista heer kulka celceliska oo dib isu quudin doona. Si kastaba ha noqotee, dhinacyada kala duwan ee saameeya isbeddelkan heerkulka waa in sidoo kale lagu xisaabtamo. Tusaale ahaan, koritaanka algae-yada yaryar waxay sidoo kale doorbidaan nuugista kaarboon dioxide ee ay ku jirto sawir-qaadista. Tani waxay gacan ka geysaneysaa yareynta tirada gaaska aqalka dhirta lagu koriyo, taas oo iyana Waxay naga caawin doontaa inaanan kor u qaadin heer kulka.
Kadibna, waxaa lagama maarmaan ah in la falanqeeyo dheelitirka u dhexeeya xaddiga kuleylka ee Antarctica ay awood u leedahay inay sii haysato sababo la xiriira hoos u dhac ku yimaadda albedo-ka dhulka, oo ay weheliso awoodda algae ee yar-yar si ay awood ugu yeelato inay ka soo nuugto kaarboon-ogsaydhka jawiga. Sidaan ognahay, kaarboon laba ogsaydhku waa gaas lagu koriyo oo awood u leh inuu kuleylka xajiyo. Sidaa darteed, kaarboon laba ogsaydh badan ayaa ku jirta jawiga, kuleyl badan ayaa la keydin doonaa sidaa darteedna wuxuu kordhin doonaa heerkulka.
Daraasado ku saabsan algae-yada yaryar ee Antarctica
Waxaa jira daraasado badan oo horey loogu daabacay joornaalka Nature Communications Waxay saadaalinayaan in barafka cagaaran uu kusii faafi doono guud ahaan qaaradda Antarctic. Maaddaama isbeddelka cimilada uu kordhayo heerkulka celceliska adduunka, waxaa nalagu leeyahay faafitaan ballaaran oo algae ah.
Daraasaduhu waxay kaloo muujiyeen in Antarctica ay tahay meesha muujineysa isbedelada uu keenay isbedelka cimilada sida ugu dhaqsaha badan. Diirimaadkan ayaa si xawli ah ugu sii kordhaya qaybtan meeraha. Xogta daraasadda ayaa muujineysa in bishii Janaayo, mowjado kuleyl ah laga diiwaan geliyey qeybta bari ee Antarctica. Mawjaddan kuleylka ah waxay sababtay heerkulka 7 darajo oo ka sarreeya celceliska. Maaddaama hawsha kululaynta ay socoto, qaddarka microalgae sidoo kale wuu sii kordhayaa.
Dhibaatadu waxay tahay in barafku uusan sii waarin sidii hore. Waa inaan sidoo kale tixgalino kororka heerka badda ee sababi doona wadarta dhalaalida barafka Antarctic. Si si fiican loo fahmo, waa in la tixgeliyaa in farqiga ugu weyn ee u dhexeeya Antarctica iyo North Pole uu yahay in Antarctica ay jirto qaarad dhul ah oo ka hooseysa barafka. Tani waxay keentaa, haddii barafku ku dhalaaliyo dhulka korkiisa, inuu u kaco heerka badda. Ka soo horjeedku wuxuu ku dhacaa Cirifka Waqooyiga. Xarkaha cirifka ee qaybta woqooyi ma leh qaarad iyaga ka hoosaysa. Sidaas darteed, haddii barafkani dhalaaliyo kor uma qaadi doono heerka badda.
Algae ee lagu bartay Antarctica waxay ku urursan yihiin xeebta. Tani waa sababta oo ah waa meelaha sii kululaanaya maaddaama ay leeyihiin heerkul celcelis ahaan ka hooseeya eber darajo. Faafitaanka microalgae sidoo kale waxaa dhiirrigeliya xayawaanka naasleyda iyo shimbiraha badda. Waana in xaarka xayawaankani ay aad u nafaqo u yihiin noolaha noocan ah ee sawir-qaadashada ah. Taasi waa, isla saxaraduhu waxay u adeegaan sidii bacrimin waxayna gacan ka geystaan ​​koritaankeeda.
Qashin-qubka cusub ee 'CO2'
Waxaa lagu ogyahay daraasadaha in gumeysiyada algal badankood ay kudhowyihiin gumeysiga penguin. Waxay ku yaalliin meelaha ay in yar ku nastaan ​​iyo agagaaraha meelaha qaarkood ee ay shimbiraha buulkooda ku ciyaaraan.
Maxaa loo arki karaa inay yihiin qodob wanaagsan oo intaas oo dhan ah, waa in jiri doona waaskad cusub oo loogu talagalay CO2 meeraha. Maaddaama algae ay hayso heer sare oo ah sawir-qaadis, tamartooda ayaa la soo saaraa inta lagu guda jiro hawshan gaaska aqalka dhirta lagu koriyona waa la nuugaa. Waad ku mahadsantahay koritaanka algae, qadar badan oo kaarboon laba ogsaydh ah ayaa laga soo saari doonaa jawiga waxaana lagu tirin karaa inuu yahay dhibic wanaagsan. Saxankan cusub ee 'CO2' nuugi kara ilaa 479 tan sanadkii. Jaantuskan ayaa laga yaabaa inuu ka sareeyo tan iyo markii ay jiraan noocyo kale oo liin dhanaan ah iyo algae casaan ah oo aan weli lagu darin daraasadda.
Ha u maleynin in waxaas oo dhan ay noqon doonaan kuwo guud ahaan wanaagsan, tan iyo cawaaqibka isbeddelka cimilada ayaa ah mid aad u daran oo saameyntan barafka cagaaran aan la dheelitiri karin.
Macluumaadkan waxay wax badan ka baran karaan barafka cagaaran iyo muhiimada uu leeyahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Baraf cagaaran
Meerayaasha gudaha ah